Ny tononkalo fitiavana dia tsy maintsy manohina ny fo. Ary izany indrindra no mbola tsy nanjo anay raha nitady tononkalo fitiavana mahafinaritra izahay.
Antony ampy hamoahana tononkalo fitiavana vaovao. Ity tononkalo manaraka ity dia tongasoa hozaraina. Manome rakitra jpg izahay amin'ny faran'ity tononkalo ity:
Tononkalo fitiavana -
Tononkalo fitiavana - izaho sy ianao
Masoandro mamaky masoandro,
ho malalako foana ianao.
Amin'ny rivotra sy ny toetrandro, na oram-baratra na oram-panala,
hiaraka foana isika.
Mifanome tanana izahay mandositra
ny vato rehetra miakatra sy midina.
Amin'ny andro tsara sy ratsy
manana zavatra holazaina foana isika.
Misokatra ny varavarana, miditra eto ianao
mitempo haingana kokoa ny foko, manitra tsara ianao.
Miady saina ianao ary reraka be koa
avia handry ary hazony mafy aho
Tononkalo fitiavana | Tononkalo momba ny fitiavana sy ny faniriana
mpanoratra famoahana mpiasaNavoaka tamin'ny 10. March 2020 18. Jolay 2021 Sokajy Fianakaviana & fiaraha-miasaKeywords Meteza ho ray aman-dreny fa mijanona ho mpifankatia, tononkalo, Liebe, Tononkalo fitiavana
indray Lahatsoratra taloha: Bilingual amin'ny akanin-jaza
more Lahatsoratra manaraka: Lamaody sy fikarakarana manokana